सनराइज बैंकले ३ अर्बको ऋणपत्र जारी गर्दै -
November 5, 2019 अखवार अनलाइनLeaveaComment on सनराइज बैंकले ३ अर्बको ऋणपत्र जारी गर्दै
काठमाडौं १८ कात्र्तिक । सनराइज बैंकले व्यापार विस्तारका लागि थप ३ अर्बको ऋणपत्र जारी गर्ने भएको छ। बैंकले मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी मुलुककै पूजी बजारको विस्तारका लागि बुधबारबाट सो रकम बराबरको ऋणपत्र निश्कासन गर्ने जानकारी गराएको हो।
वार्षिक १० दशमलब २५ प्रतिशत ब्याजदरमा सो ऋणपत्र जारी हुँदैछ। निरन्तर उच्च प्रतिफल लिइरहने ग्राहकका लागि सो ऋणपत्र अति उपयोगी हुने बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनक शर्मा पौडेलले बताए। बैंकको ऋण पत्र सात वर्ष अवधिको हुनेछ। त्यसको ब्याजको भुक्तानी ६र६ महिनामा गर्ने योजना पनि तय गरिएको बैंकले जनाएको छ।
बैंकका ऋणपत्र चाँडोमा कार्तिक २४ गते र त्यसभित्र बिक्री नभएमा मंसिर १९ गतेसम्म बिक्री खुला हुने समय पनि निर्धारण गरिएको छ। सो ऋणपत्रको निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक भने सिद्धार्थ क्यापिटल रहेको छ। ऋण पत्रका लागि सो बैंकको सबै कार्यालयबाट आवेदन दिन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पौडेलले बताए।
अर्काकी श्रीमतीसँग मध्यरातमा ओछ्यानमै स्थानीयले देखेपछि‘….
रूद्राक्ष किन र के का लागि लगाइन्छ, कति मुखे रुद्राक्ष लगाउदा के पाइन्छ ? थाहा पाउनुहोस
मंगलबार एकाविहनै भेटियो सात जनामा कोरोनाको संक्रमण, नेपालमा संक्रमितको संख्या ८२ पुग्यो
May 5, 2020 अखवार अनलाइन
कस्तो छ तपाइको आजको भाग्य थाहा पाउनुहोस राशिफल हेरेर (बैशाख २२ गते आइतबारको राशिफल)